मनोरञ्जन – Page 147 – rastriyakhabar.com
काठमाडौं ,११ जेठ । गीतकार माधव निर्दोषका रचना र संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको संगीतमा आधुनिक गीत गजल संग्रह आत्मियता बजारमा आएको छ । बरिष्ठ गीतकार एवं पूर्व अर्थमन्त्री संकरप्रसाद कोइरालाले शनिबार एक समारोहका बीच उक्त एल्वमको विमोचन गरे । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कोइरालाले समाजका विभिन्न तह र..
नायक राजेश हमालको विवाह सम्पन्न
शनिबार, जेष्ठ १०, २०७१ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १० जेष्ठ । नेपाली चलचित्रका नायक राजेश हमालको विवाह आज सम्पन्न भएको छ । हमालले लामो समयदेखिकी प्रेमिका मधु भट्टराईसँग लगनगाँठो कसेका हुन् । काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा हिन्दू पराम्परा अनुसार हमालको विवाह सम्पन्न भएको हो । वधुतर्फको आग्रहमा सञ्चारमाध्यमहरुका लागि गोप्य राखिएको वैवाहिक..
निरोगी रहन बिहान के गर्ने ?
दिनको सुरुवात बिहानीबाट भएजस्तै हाम्रो दैनिकी पनि बिहानबाटै सुरु हुन्छ । त्यसैले जति सक्यो सबेरै उठेर आफ्ना क्रियाकलाप सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ । चाँडो सुत्ने, चाँडो उठ्ने गर्नाले मान्छेलाई स्वस्थ, धनी, बुद्धिमानी बनाउँछ भन्ने उखानै पनि छ । बिहान चाँडो उठ्नेले ढिलो उठ्नेले भन्दा सहजरूपमा समयको..
महिलाको वक्षस्थल एक महत्वपूर्ण प्रजनन अंग मात्र होइन सुन्दरताकेा प्रतिक पनि मानिन्छ । त्यहीँ भएर होला महिलाहरु आफ्नो वक्षस्थलको सुन्दरताप्रति निकै सजग हुन्छन् । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ । केही समय पहिले एक विदेशी अनलाइनले गरेको सर्भेक्षणले एउटा अनौठो तथ्य..
अनुहार सफा र सुन्दर बनाउन यसो गर्नुस्
आफ्नो छालालाई सफा र सुन्दर बनाउन घरमै बनाएको फेस प्याक लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ। यिनैमध्येका चियाको पानी र महको फेसप्याक पनि एउटा हो। यसलाई लगाएपछि हुने जादुमय परिवर्तनको महसुस आफैंले गर्न सकिनेछ। चाहिने सामग्री चिसो बनाएको चियाको पानी दुई चम्चा चामलको पिठो (चामलको पिठोले स्क्रबको काम गर्छ) डेढ..
अहिले मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत प्रयोग गर्छन्।लिंगको आकार ठूलो..
दिपक न्यौपानेको दोश्रो आधुनिक गिती संग्रह मेरो जिन्दगानी बजारमा
योगी योगेन्द्र संखुवासभा । गीतकार दिपक न्यौपानेको पहिलो आधुनिक गिती संग्रह उपहारमा चोटको अपार सफलता पछि दोश्रो आधुनिक गिती संग्रह मेरो जिन्दगानी बजारमा आएको छ । संखुवासभा जिल्लाको चैनपुर सिद्ध पोखरीमा जन्मनु भएका गीतकार दीपक न्यौपाने भने हाल बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा हुनुहुन्छ ।..
विश्वकै सुन्दरीको सूचीमा भारतबाट प्रियंका मात्र
एक अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीले गरेको सर्वेक्षणमा बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा सुन्दर महिलाहरुको सूचीमा परेकी छिन् । अधिकांश हलिउड स्टारहरुले पकड जमाएको यो सूचीमा प्रियंका एक मात्र बलिउड नायिका हुन् । यो एजेन्सीले विश्वका १३ सुन्दर महिलाहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको हो । विश्व चर्चित गायक ब्रायन..
यौन क्षमता अभिवृद्धिको लागि घरेलु उपाय
अहिले यौनवद्र्धक औषधिको प्रयोग बढिरहेको छ । पत्रपत्रिका र टेलिभिजनहरुमा यौनवद्र्धक औषधिको विज्ञापन पनि निकै आउन थालेका छन् । तर कतिपयले ती औषधिको सेवनबाट पैसामात्र खेर गएको तथा नकारात्मक असर पुगेको महसुस गरेका छन् । एक भारतीय स्वास्थ्य अनलाइनले यौन क्षमता अभिवृद्धिको लागि घरेलु उपाय सुझाएको छ ।..
सेक्स कति गर्ने ?
सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न..
तिमी मेरो पहिलो प्रेमिका हौ : महिला सधैं आफ्नो पे्रमी वा श्रीमान्को जीवनमा अरू कसैसँग पनि सम्बन्ध नभएको होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्। त्यसैले तपाईंले पे्रमिका वा श्रीमतीलाई सधैं उनीसँगमात्रै प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनुपर्छ। यसले तपाईंको सम्बन्धलाई दिगो बनाउन सहयोग..
दिपाले साइत जुराएर घर पूजा गरिन्
अभिनेत्री दिपाश्री निर्रौलाले साइत जुराएकी छिन् । यो साइत दिपाको नभएर उनले एक वर्ष अघि किनेको घरको जुरेको हो । वानेश्वर हाइटमा रहेको तीन तले घरमा दिपाले साइत जुराएर घर पूजा गरिन् । बुद्व जयन्तीको दिन पारेर दिपाले घर पूजा, होम, बास्तुपूजा, सत्य नाराणको पूजा लगाएकी हुन् । दिपाको घर पूजामा सर्कलका..
अन्तत लामो समयको अन्तरलापछि नायक राजेश हमालले आफ्नी प्रेमिका मधु भट्टराइलाई सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हमालले पहिलो पटक मिडियाको सामु प्रेमिका सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि मिडियामा मधुका पुराना तस्बिरहरु मात्र आएका थिए । जुन उनले करिब १० बर्ष अघि खिचेकी थिइन्..
३३ वर्षकी भइन् सन्नी लियोन, थाहा पाउनुस् उनका १० गोप्य कुराहरु
मुम्बई (एजेन्सी)– सन्नी लियोन आज ३३ वर्ष पुगेकी छिन् । उनको सेक्सी अवतारसँग धेरै मानिसहरु जानकार छन् । तर सन्नीको यस्ता धरै गोप्य कुराहरु छन् जुन धेरैलाई थाहा छैन । आउनुहोस्, उनको जन्मदिनको अवसरमा उनका १० गोप्य कुराहरुको जानकारी हामी तपाईंलाई दिनेछौँ । १. सन्नी लियोनको सक्कली नाम करनजीत कौर बोहरा हो । २...